BGR - - Tele relay က Milky Way အတွက် supermassive အနက်ရောင်အပေါက်တစ်တောက်ပနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် flash ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "ဟုအဆိုပါ Milky Way အတွက် supermassive အနက်ရောင်အပေါက်တစ်တောက်ပနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် flash ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ် - BGR
အများအပြားနဂါးငွေ့တန်းများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခု supermassive အနက်ရောင်အပေါက်ကိုဗဟိုပြုစဉ်းစားပါ။ Sagittarius ဝိသေသနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အဖြစ်လူသိများသည့်တွင်းနက်၏တည်နေရာ, တစ်ဦးက * (အသံထွက် "Sagittarius တစ်ဦးကကြယ်ပွင့်") ကိုအလွယ်တကူကမ္ဘာမြေကနေမြင်နိုင်သည်မဟုတ်, သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲအနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာသုံးပြီးကြည့်ရှုနိုင် ယခုနှစ်အချို့သောအချိန်များတွင်။
အဆိုပါအနက်ရောင်အပေါက်ကိုမကြာခဏ flickers ပေမယ့်ပေါက်ကွဲသံမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦး supermassive တွင်းနက်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် Keck စောင့်ကြည့်ခြင်းမှသိပ္ပံပညာရှင်များပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်း၏အနက်ရောင်အပေါက်၏ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူကြသည်။ ဒါကြောင့်နာရီအနည်းငယ်မှောင်မိုက်ရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီသိပ္ပံပညာရှင်တွင်းနက်ပေါ်တွင်မှန်ဘီလူးဆွဲငင်နေချိန်တွင်ပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြတစ်ဦးကတောက်ပ flash ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့အလွန်သဘာဝအားဖြင့်အနက်ရောင်တွင်းမြင်နိုင်အလင်းမှခေတ်သစ်တယ်လီစကုပ်နည်းပညာနှင့်မြင်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့ကထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါသည်တွင်းနက်မျိုပစ္စည်းအဖြစ်ပြုလုပ်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု. မြင်နိုင်တဲ့ flickering အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဓါတ်ရောင်ခြည် detect လုပ်ဖို့အတန်ငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ] @keckobservatory အနက်ရောင်အပေါက် Sgr တစ်ဦးက * ။ အဆိုပါအနက်ရောင်အပေါက်အစဉ်အမြဲ variable ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ဝေးအနီအောက်ရောင်ခြည်တွင်တွေ့မြင်ဖူးတဲ့တောက်ပခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီညကိုတွေ့မြင်ရန်စတင်မှီကဖြစ်ကောင်းပင်တောက်ပခဲ့သညျ! pic.twitter.com/MwXioZ7twV
- Tuan Do (@quantumpenguin) အဆိုပါသြဂုတ်လ 11 2019
အဆိုပါအချိန်ကြာရိုက်ကူးမှုမေလတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်နှင့်သုတေသီများစောင့်ကြည့်ရက်ပေါင်းများစွာကုန်ရပြီ။ အဆိုပါတောက်ပ flash ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြပေမည်အရာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်။ အတိုင်း ScienceAlert သုတေသနအဖွဲ့သည်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားနေသည်:
အဆိုပါ Galactic စင်တာရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်လူသိများနှစ်ဦးကအရာဝတ္ထုဖွယ်ရှိသံသယရှိသူဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာကြီးမားသောဓာတ်ငွေ့မိုဃ်းတိမ်သည်မကြာသေးမီကခြားပြီးကိုက်ခဲ့ကြပေမည်သည့်အနက်ရောင်အပေါက်၏အလင်း-နာရီအနည်းငယ်သောင်းချီလေ့လာတွေ့ရှိနှငျ့အခွားသော S0-2 လို့ခေါ်တဲ့ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
S0-2 ဗဟိုကသာ 17 အလင်း-နာရီပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကအနက်ရောင်အပေါက်နှင့်အတူကြယ်ပွင့်များ၏အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးစေပြီရသောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှုအတွက်တိုးမှဦးဆောင်သည်ဟုဖြစ်နိုင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်။
ထုတ်ဝေခံရဖို့စာရွက်စာတမ်းများ၏တစ်ဦးကအသစ်တစ်စုံ ရူပနက္ခတ္တဗေဒဂျာနယ်ပေးစာ အဘယ်သူမျှမနောက်ဆုံးကြေညာချက်ပါဝင်သော်လည်းယခုအဘို့ဤသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်နှစ်ခုအကောင်းဆုံးယူဆထားခြင်းမျှသာဒေတာရှိပါတယ်။
သေလွန်သောသူတို့သည်ဂြိုလ်သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရတစ်ဘီလီယံကိုနှစ်ပေါင်းအာကာသအတွင်းရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်း "ဖုတ်ကောင်" transmit - BGR
La grand-mère de l'enfant abandonné aux urgences témoigne – VIDEO